Xildhibaano iyo Dad Caan Ka Ah UK Oo Ka Cadhooday Maraykanka Oo Duray Amaanka Somaliland | Gabiley News Online
Xildhibaano iyo Dad Caan Ka Ah UK Oo Ka Cadhooday Maraykanka Oo Duray Amaanka Somaliland
Xildhibaano, siyaasiyiin iyo dad aqoonyahan ah oo caan ka ah dunida ayaa jawaabo ka bixiyay maqaal lagu qoray wargeyska caanka ah ee Daily Mail oo uu ku sheegay in Somaliland tahay dal dagaal ragaadiyay. Wargeyska ayaa wuxuu warbixintiisa ku sheegay in dawladda Maraykanku ay dal-ku-galkeeda u diiday gabadh ay isku lammaanyihiin Raysalwasaaraha Ingiriiska oo kal hore socdaal ku timid Somaliland lana kulantay Madaxweyne Biixi. Sababata dal-ku-galka loogu diiday ayuu wargeysku ku sheegay booqashada ay ku timid Somaliland.
Hase yeeshee shakhsiyaad caan ka ah dalka Ingiriiska iyo dalalka reer Yurub iyo weliba Maraykanka oo la ixtiraamo ayaa cambaareeyay go’aanka Maraykanku dal-ku-galka ugu diiday gabadhaas iyagoo sidoo kale wargeyska ku cambaareeyay kelmada uu Somaliland u adeegsaday ee ah dal uu dagaal ragaadiyay, markii uu ka hadlaayay booqashada ay gabadhaasi ku timid Somaliland.
Xildhibaan Stephen Doughty oo ka tirsan Baarlamaanka Ingiriiska, socdaalana ku yimid Somaliland ayaa bartiisa twitterka wuxuu ku qoray “Donald Trump si wayn ayuu ugu khaldan yahay siyaasadan, balse sidoo kale Daily Mail sida ay hadalka u dhigtay waa si qaloocan oo aan sax ahayn. Somaliland maaha dal dagaal ragaadiyay. Waxaan ku tegay sanadkii hore halkaas [Somaliland] safar guul ah aniga oo la socda xildhibaan Liz McInnes iyo xildhibaan Matthew Offord. Waa meel horumar leh oo dadka soo dhowaysa.”
Mr. Michael Walls oo ahaa madaxii horkacayay goob-joogayaashii doorashooyinkii kala duwanaa ee Somaliland, aqoon badana u leh Somaliland ayaa isagoo xoojinaya qoraalka xildhibaan Stephen, wuxuu isna twitterka ku qoray oo uu yidhi “Si buuxda ayaan kuugu raacsanahay; Somaliland waa ka dheer tahay dal dagaal ragaadiyay. Tani waa tusaale kale oo muujinaya sida qaar ka mid ah siyaasadaha caalamiga ah iyo suxufiyiintu ay u abuurayaan natiijooyin khaldan iyaga oo si joogto ah uga been sheegaya xaqiiqda. Booqo Somaliland si aad adigu indhahaaga ugu soo aragto.”
James Carver oo ah siyaasi caan ka ah Ingiriiska, horena uga tirsanaa Baarlamaanka Midowga Yurub, ayaa wuxuu isaguna bartiisa twitterka ku qoray qoraal kooban oo uu ku sheegay inuu rajaynayo in maqaalka uu wargeysku qoray uu Somaliland faa’iido u leeyahay kana caawin doono aqoonsi raadiska, isagoo xusay inuu Somaliland socdaal ku yimid 5 jeer, waxaanu isweydiiyay inuu baajiyo socdaal u qorshaysan inuu Maraykanka ku tago, waxaanu yidhi “Waxaan rajaynayaa in arinkani uu ku soo jeediyo indhaha dedaalka socda ee xaqa ah ee loogu jiro sidii ay Somaliland dib ugu heli lahayd aqoonsi caalami ah. Dalkan quruxda badan ee nabadda ah waxaan booqday shan jeer. Malaha waa inaan baajiyaa qorshahaygii ahaa inaan safar ku tago Maraykanka.”
Michael Rubin oo isna ah khabiir Maraykan ah ayaa qoray qormo uu kaga hadlay sababta uu Maraykanka uu haweenaydaas ugu diiday dal-ku-galka ee ah inay booqatay Somaliland, isagoo ku tilmaamay nacasnimo cadaan ah, “In lagaga horjoogsado lammaanaha Boris Johson Maraykanka waxay booqatay Somaliland waa nacasnimo cadaan ah.”